Global Voices teny Malagasy » Kiobà: Herintaona nibilaogina avy ao anatiny · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Septambra 2018 14:35 GMT 1	 · Mpanoratra Issa Villarreal Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Latina, Kiobà, Fahalalahàna miteny, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Nanamarika ny tsingerintaona voalohany nijoroan'ny Bloggers Cuba [es] , vondrom-piarahamonin'ny bilaogera nanoka-tena hanoratra momba ny fireneny “avy ao anatiny” ny 27 Novambra. Ao anatin'ny bilaogin'izy ireo iombonana, ahitàna ny the “Cuban reader” [es] , angona fanehoan-kevitra RSS avy amin'ireo bilaogy maherin'ny 30 eo amin'ny tontolon'ny bilaogy Kiobàna , izay azo ampiasaina ho toy ny fanombohana ho an'izay mpitsidika te-hamaky momba ny firenena ihany koa ny asan'izy ireo.
Ny mampiavaka ny Bloggers Cuba dia ny fomba fijeriny ao anatiny: na dia misy bilaogy mihoatra ny 700 aza miresaka momba an'i Kiobà, dia mihevitra ny ankamaroan'ireo bilaogy ireo ho tazonin'ireo mpanoratra monina ivelan'ny nosy izy ireo. Niteraka fifampikasohana teo amin'ireo mpanoratra avy amin'ireo mpamaky ny fomba fijerin'izy ireo ary nanamafy ny fifankatiavana teo amin'ireo mpandray anjara, araka ny nampahatsiahivin'izy ireo tamin'ny fitetezana bilaogy momba ny tsingerintaonan'ny lahatsoratra .
Mpandray anjara, Roger TM nizara hoe:
Herintaona lasa izay dia 11 monja izahay no tao amin'ny efitrano mangatsiaka tao amin'ny Palacio Central de Computación (Lapa foiben'ny Solosaina), taorian'ny fihaonana maromaro tsindraindray, nisy ireo bilaogera hafa manana fahalianana mitovy ary nanatevin-daharana ihany koa. Ankehitriny, herintaona katroka izay, nahita hazavana ity tetikasa ity , ary ankehitriny, mihoatra noho ny vondrona bilaogera mitovy hevitra, vondrona mpinamana izahay (…)
Afaka manidy varavarana izy ireo, afaka mamela anao irery izy ireo, afaka miampanga anao amin'ny zavatra iray ary miezaka ny manipy anao any anaty afo izy ireo … fa raha manana namana tsara ianao, dia mety ho voavonjy koa. Tahaka izany ny Bloggers Cuba, vondrona mpinamana tafaraka manodidina ny bilaogy, manana fitiavana miala voly ao anatin'ny tontolon-tserasera, ary hevitra sasantsasany momba ny tokony ho fandehan-javatra amin'ity nosy ity … Ary ny faniriana hanao zavatra, hanonofy sary goavana, na dia nijanona tamin'ny hevi-draviny mihoatra ny indray mandeha aza izahay. Ary tsara kokoa: tsy nisy niantso anay, tsy nisy niangavy anay hanao izany, tsy nisy olona nifehy ny “famitana ny asa”. Tsy mbola nahatsiaro afaka toy izao aho.
“Frantsay ianao, tsy tokony hiditra amin'ny olanay, tsy tokony hanana hevitra, tsy manana zo, raha mozika rock no zavatra tianao, manaova ezaka amin'ny gitara ary tohano hatrany ny tarika, fa avelao ny politikako, satria tsy zava-dehibe aminao izany … tsy tokony hamoaka zavatra tsy misy dikany tahaka izany ao amin'ny bilaogy ianao, fa mijanona amin'ny zavatra tianao … ok? “…
Nahazo fanevatevana, fanesoana, fandrahonana ary fanalam-baraka imbetsaka aho noho ny Bloggers Cuba 🙂 …. saingy nanamafy tamiko ihany koa ny Bloggers Cuba fa tsy ny gusanos rehetra (olona nandao ny nosy) no ratsy ary tsy ny revolisionera rehetra no tsara, sy ny mifamadika amin'izany. Nanokatra varavarana ho amin'ny fifanakalozan-kevitra ny Bloggers Cuba ary nitarika sehatra vaovao amin'ny bilaogy Kiobana sahanina avy ao anatiny: Voces Cubanas, Blogcip … Ao anatin'izany fiheverana izany, BC no mpisava lalana.
Ora roa taorian'ny tolakandro mahakamo amin'ny volana Mey, nahazo ny mailaka tokana izay nomarihako kintana tamin'ny GMail aho. Fanasana avy amin'ny BC mba hidirako ao amin'ny vondron-dry zareo. Efa enim-bolana mahery nanomboka tamin'izany, mbola tsy nino ihany aho. “Tsy mendrika izany aho” –Nieritreritra aho hoe; “inona no tokony hosoratako?” – Mbola manontany tena aho. Tonga tao amin'ny toeram-pihaonana aho, fety tsy hay adinoina, ary nihaona tamin'ny olona marobe izay nitarika ny fiainako mivantana nanomboka teo: olona izay tena ankafiziko tanteraka, olona mahatonga ahy hahatsapa ho tena salama, olona azoko resahana mandritra ny adiny folo. Olombelona VIP, feno eritreritra, tanora sy mahakiobàna.
Namoaka famintinana ireo lahatsorany isam-bolana izay azo trohina amin'ny endrika PDF ihany koa ny Bloggers Cuba.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/09/19/126203/
 Bloggers Cuba [es]: http://www.bloggerscuba.com/
 the “Cuban reader” [es]: http://www.cubareader.bloggerscuba.com
 fanehoan-kevitra RSS avy amin'ireo bilaogy maherin'ny 30 eo amin'ny tontolon'ny bilaogy Kiobàna: http://en.wikipedia.org/wiki/Rss
 tsingerintaonan'ny lahatsoratra: http://www.bloggerscuba.com/post/mi-parrafo-por-el-ano-de-bloggers-cuba/